Global Voices teny Malagasy » Maraoka: Ny fanandràmana ny henné · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Jona 2010 18:13 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika Candy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Maraoka, Saripika, Zavakanto & Kolontsaina
Efa an'arivontaona maro izao no nisian'ny “henné”  amin'ny maha-zavakanto azy. Hita manomboka any Maraoka hatrany Bangladesh, ampiasaina handokoana volo sy hanaingoana vatana ny “henné”. Any Maraoka dia ampiasaina hanaingoana ny tànana sy ny tongotra amin'ny kisarisary sarotra ny “henné”, ary koa handokoana volo any amin'ny “hammam“.
Vao haingana no nisy boky nivoaka, mirakitra momba ny fomba nentin-drazana mifandray amin'ny “henné”. Ilay boky, mitondra ny lohateny hoe “Moor: A Henna Atlas of Morocco,” dia ahitàna kisarisary sy saripikan'ny hatsaràn'ny fomba fanao Maraokana amin'ity zavakanto ity. Topi-maso kely:
Manana blaogy ihany koa ireo mpanoratra ilay boky, ao amin'ny Moor Henna .
Vao haingana i Emily, mpirotsaka antsitrapo ao amin'ny “Peace Corps” (Emily and Jon in Morocco ) no nanandrana ny henné voalohany indrindra. Mamoaka sarin'ny fanaovana henné  any amin'ny teram-piasàny fanaovana taozavatra izy ao amin'ny blaoginy:
Fanaovana ny henné any Maraoka
Namoaka ny sarin'ny tanany koa i Emily, taorian'ny fanisiana henné:
Henné, ora maromaro aorian'ny hanaovana azy
Milaza i emily momba ny andrana nataony:
Nony nody aho dia somary nasiako menaka oliva kely ilay henné maina talohan'ny nanalako azy. Niteny tamiko ireo tovovavy hoe menaka legioma ihany no ampiasaina (mety hoe satria mora vidy io), nefa aleoko nisafidy izay azo antoka. Mieritreritra aho fa tokony hanampy ilay henné ho hitoetra izany, nefa tsara ihany koa izy eo amin'ny hoditra satria tsy dia mahafinaritra loatra ny mahatsapa ny henné maina. Vao alàna ny henné dia mavomavo mazava ny lokony, dia avy eo miha-maizina rehefa afaka ora maromaro. Fa androany izy loko maramara tsara.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/06/29/6775/
 Mamoaka sarin'ny fanaovana henné: http://emily-jon-morocco.blogspot.com/2010/06/impromptu-henna-party.html